इन्स्ट्राग्राममा यी दुई हट सुन्दरीको भिडन्त, को अगाडि ? - www.kchhakhabar.com
इन्स्ट्राग्राममा यी दुई हट सुन्दरीको भिडन्त, को अगाडि ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, पौष १०, २०७३ समय: १७:१९:१३
रियालिटी स्टार किम कार्दशियन हलिउडका चर्चित कलाकार भन्दा पनि फ्यानको नजरमा प्रसिद्ध छिन् । उनको विशेषगरि, सामाजिक संजालमा सर्वाधिक धेरै चर्चा हुन्छ । मिडियामा पनि उनका विकिनी र हट तस्बिरले सधै स्थान पाउँछन् । किमलाई सेल्फी क्विन पनि मानिन्छ । उनी सेल्फी लिएर आफ्नो इन्स्ट्राग्राममा पोष्ट गर्ने गर्छिन् । तर, अब उनलाई इन्स्ट्राग्राममा अर्की सुन्दरीले चुनौती दिएकी छिन् । उनलाई गायिका वियोन्सले उछिन्दै इन्स्ट्राग्राम क्विनको उपाधी छिनेकी हुन् ।
किमको ४२ मिलियन फलोअर्स छन् भने वियोन्सको ४२.६ मिलियन फलोअर्स पुगेका छन् । किमको फलोअर्सको संख्या बढिरहेको छ तर वियोन्स भन्दा उनी पछाडि छिन् ।
रियालिटी स्टार किम कार्दशियन हलिउडका चर्चित कलाकार भन्दा पनि फ्यानको नजरमा प्रसिद्ध छिन् । उनको विशेषगरि, सामाजिक संजालमा सर्वाधिक धेरै चर्चा हुन्छ । मिडियामा पनि उनका विकिनी र हट तस्बिरले सधै स्थान पाउँछन् ।
किमलाई सेल्फी क्विन पनि मानिन्छ । उनी सेल्फी लिएर आफ्नो इन्स्ट्राग्राममा पोष्ट गर्ने गर्छिन् । तर, अब उनलाई इन्स्ट्राग्राममा अर्की सुन्दरीले चुनौती दिएकी छिन् । उनलाई गायिका वियोन्सले उछिन्दै इन्स्ट्राग्राम क्विनको उपाधी छिनेकी हुन् ।
स्कुल छँदै लागेको फिल्म हेर्ने बानीले छोडेको छैन । त्यति बेला भागेर फिल्म हेर्नुपथ्र्यो, लुकेर हेर्नुपथ्र्यो । स्कुलबाट ...
ज्याकी च्यान चढेको सामान्य साइकलको मूल्य १६ लाख !
एजेन्सी। हलिउड अभिनेता ज्याकी च्यान हालै भारतीय टेलिभिजन शो ‘द कपिल शर्मा शो’ मा आएका थिए। उनी आफ्नो फिल्म ‘कुङ फु योगा’...